Zvirevo 31 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
MASHOKO AMAMBO REMUERI (1-31)
Ndiani angawana mudzimai anoita zvakanaka? (10)
Anoshingaira achishanda nesimba (17)
Parurimi rwake pane mashoko emutsa (26)
Murume wake nevana vake vanomurumbidza (28)
Kuyevedza uye runako zvinopera (30)
31 Mashoko aMambo Remueri, mashoko ane uremu aakaudzwa naamai vake vachimurayira:+ 2 Ndokuudza kutiiko, nhai mwanakomana wangu,Ndotiiko nhai mwanakomana wangu wandakazvara,Nhai mwanakomana wemhiko dzangu?+ 3 Usapa vakadzi simba rako,+Kana kutevera nzira dzinoparadza madzimambo.+ 4 Remueri iwe, hazvina kukodzera madzimambo,Hazvina kukodzera madzimambo kuti anwe wainiKana kuti vatongi vati, “Doro rangu riri kupi?”+ 5 Kuti varege kunwa vakakanganwa mitemo yakagadzwa,Votyora kodzero dzevakaderera. 6 Ipai doro vaya vava kufa+Uye ipai waini vaya vari* kushungurudzika.+ 7 Regai vanwe vakanganwe nhamo dzavo,Varege kuramba vachiyeuka matambudziko avo. 8 Taura uchitsigira mbeveve;Rwira kodzero dzevanhu vese vava kufa.+ 9 Taura uchivamiririra uye tonga zvakarurama;Rwira kodzero dzevakaderera nevarombo.+ א [Aleph] 10 Ndiani angawana mudzimai anoita zvakanaka?*+ Anokosha kupfuura matombo ekorari* nekure. ב [Beth] 11 Murume wake anovimba naye nemwoyo wese,Uye hapana chinokosha chaanoshaya. ג [Gimel] 12 Anopa murume wake mubayiro wezvakanaka, kwete zvakaipa,Mazuva ese eupenyu hwake. ד [Daleth] 13 Anotsvaga mvere dzemakwai nemachira;Anonakidzwa nekushanda nemaoko ake.+ ה [He] 14 Anoita sengarava dzemutengesi,+Achibva nezvekudya zvake kure. ו [Waw] 15 Anomukawo huchiri usiku,Achipa mhuri yake zvekudyaNekupa varandakadzi vake migove yavo.+ ז [Zayin] 16 Anofunga nezvemunda outenga;Anodyara munda wemizambiringa nezvaakashandira.* ח [Heth] 17 Anogadzirira kuita basa rakaoma,*+Uye anosimbisa maoko ake. ט [Teth] 18 Anoona kuti kutengesa kwake kuri kumubatsira;Rambi rake haridzimi usiku. י [Yod] 19 Anobata chimuti chinobata shinda isati yakoswa,Uye anobata chimuti chinokosa shinda yacho.+ כ [Kaph] 20 Anotambanudzira munhu akaderera chanza chake,Uye anovhurira varombo maoko ake.+ ל [Lamed] 21 Haatyiri mhuri yake kana kuine chando,Nekuti vese vanenge vakapfeka zvinodziya.* מ [Mem] 22 Anozvigadzirira machira epamubhedha. Zvipfeko zvake ndezvejira neshinda yepepuru. נ [Nun] 23 Murume wake munhu anozivikanwa pamagedhi eguta,+Paanogara pasi nevakuru venyika yacho. ס [Samekh] 24 Anogadzira achitengesa zvipfeko zvejiraUye anotengesera vatengesi mabhandi. ע [Ayin] 25 Akapfeka simba nerunako,Uye anotarisira ramangwana nechivimbo.* פ [Pe] 26 Anotaura neuchenjeri;+Mutemo wemutsa uri* parurimi rwake. צ [Tsade] 27 Anotungamirira mabasa emumba make,Uye haadyi zvekudya zveusimbe.+ ק [Qoph] 28 Vana vake vanosimuka, vomuti anofara;Murume wake anosimuka, omurumbidza. ר [Resh] 29 Kune vakadzi vakawanda vanoita zvakanaka,*Asi iwe, chokwadi unovapfuura vese. ש [Shin] 30 Kuyevedza kunogona kungova kwekunze chete, uye runako runogona kupera,*+Asi mukadzi anotya Jehovha acharumbidzwa.+ ת [Taw] 31 Mupei mubayiro wezvaanoita,*+Uye mabasa ake ngaamurumbidze pamagedhi eguta.+
^ Kana kuti “vane mweya uri.”
^ Kana kuti “mudzimai akanaka.”
^ ChiHeb., “nezvibereko zvemaoko ake.”
^ ChiHeb., “Anosunga muchiuno make nesimba.”
^ ChiHeb., “vakavirikidza.”
^ Kana kuti “anoseka zuva ramangwana.”
^ Kana kuti “Kurayira nerudo kuri; Mutemo werudo rusingachinji uri.”
^ Kana kuti “vakadzi vakanaka vakawanda.”
^ Kana kuti “haruna maturo.”
^ ChiHeb., “Mupei zvinobva pazvibereko zvemaoko ake.”